सेयर लगानीकर्ताले किन रोजे एनएमबी बैंक र साल्ट ट्रेडिङ ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर लगानीकर्ताले किन रोजे एनएमबी बैंक र साल्ट ट्रेडिङ ?
सेयर लगानीकर्ताले किन रोजे एनएमबी बैंक र साल्ट ट्रेडिङ ?
सेयर लगानीकर्ताको रोजाइमा लगातार एनएमबी बैंक र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन परेका छन् । ओम बैंकसँगको मर्जर सम्झौतासँगै झन्डै एक वर्षपछि कारोबार खुलेको एनएमबी बैंक गत वर्षको नाफाबाट आकर्षक लाभांश घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको हो । पुँजीबजारमा सूचीकृतमध्येकै राम्रो लाभांश घोषणा गरेको व्यापार समूहको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङको सेयर मूल्य पनि लगातार १० प्रतिशत हाराहारीले बढिरहेको छ । दुवै संस्थाले ३५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
एनएमबीको सेयर मूल्यमा खासै उतारचढाव नआए पनि कारोबार सर्वाधिक भोल्युममा भइरहेको छ । यसको अर्को कारण हो- चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राम्रो वित्तीय प्रतिवेदन पस्किनु । चालू आवको असोजसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एनएमबीले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४८ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको छ । बुधबार एनएमबी बैंकको सर्वाधिक ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भयो । कारोबार अवधिमा ३०६ पटकमा सर्वाधिक ९१ हजार ६२७ कित्ता सेयर किनबेच भयो ।
कात्तिक १९ गते ६५८ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले कारोबार भएको साल्ट ट्रेडिङको सेयर मूल्य बुधबार १३७९ रुपैयाँ पुगेको छ । हरेक दिनजसो १० प्रतिशत हाराहारीले मूल्य बढेको साल्ट ट्रेडिङका लगानीकर्ताको सम्पत्ति बुधबार पनि ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङको बुधबार ९ पटक मात्र कारोबार भएको छ । त्यसमा पनि ब्रोकर नम्बर १ बाट ७ वटा कारोबार भएको छ भने ३९ र ५७ बाट एक-एक कारोबार भएको छ । सेयर विश्लेषकहरुले साल्ट ट्रेडिङको सेयर म्याचिङ गरेर बढाएको अनुमान गरेका छन् । यस विषयमा नियामक निकायले भने कुनै चासो देखाएको छैन ।
बुधबार सेयर बजार झिनो अंकले घटेको छ । बैंक र व्यापार समूहबाहेकका सबै समूह ओरालो लागेपछि समग्र बजार परिसूचक १.६५ अंकले घटेर ११२८.३४ अंकमा झरेको छ । १६५ कम्पनीको १० लाख ९७ हजार ९२० कित्ता सेयर ३० करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबरमा किनबेच भएको छ ।
प्रकाशित समय १८:२० बजे
पछिल्लाे - धुलियाबिट-भेडाबारी सडकको सर्वेक्षण सुरु
अघिल्लाे - एजियन तटीय क्षेत्रबाट ४० आप्रवासीको उद्धार